धर्म के हो त ? गत महिना मैले फेसबुक वालमा गरेको सर्वे सहित छोटो विवेचना
by Krishna KC (admin@gmail.com) | Updated: 11 Jul 2019
कृष्ण के सी/अमेरिका/७/११/१९
जुन १४ २०१९ मा धर्म के हो भन्ने जिज्ञासा फेसबुकमा उठाएको थिएँ। धेरैजनाले जवाफ दिनुभयो। कतिले इनबक्समा कस्तो अप्ठेरो कुरा सोध्नुभएको, हेर्दा सजिलो तर जवाफ दिन लागेको त घण्टौ लाग्यो तर पनि जवाफ जुटाउन सकिन। अनि कतिपयले हल्का जवाफ दिनुभयो। एकजनाले अध्ययन गरेर जवाफ दिनुभयो। त्यो सबै कमेन्ट पढेर मैले थप अध्ययन गरे अनि यो छोटो कुरा लेख्दै छु। यो बिषयमा अर्को पटक पूर्वीय दर्शनका व्याख्याताबाट अर्को जवाफ दिने प्रयास गर्नेछु।
धर्मबारे नेपाली शब्दकोशले व्यक्ति वा बस्तुमा सधैं रहिरहने गुण वा मूल वृत्ति, प्रकृति, स्वभाव हो भनेको छ। त्यस्तै स्वर्ग प्राप्त गर्न गरिने पुण्य कर्मलाइ पनि धर्म भनेको छ। अनि शब्दकोशले अझै थपेको छ, यो कुनै जाति, वर्ग, पद आदिका निम्ति निर्धारित कार्य वा व्यवहार पनि हो। धर्म लोकको हित वा व्यवस्थाका लागि अँगालिने कर्म वा कर्तव्य हो। जस्तो कि मानवधर्म, नारीधर्म, युगधर्म इत्यादि।
मेरो बुझाइ चाहिं, कुनै पनि व्यक्ति या समुहले धारण गर्ने सत्य गुण या त्यसका कारण अरुलाई भलाइ हुने लोकको सेवा अर्थात लोकसेवा हो। अरुको कुभलो गर्ने व्यक्ति धर्मी होइन। त्यसैले धर्म गरे पुण्य र धर्म नगरे पाप हुन्छ भनेको हो। यसर्थ, समाजमा समाज नियन्त्रणको लागि धर्म आवश्यक छ। धर्म नमान्दा मानिस पापी हुँदै गएर ज्यानमार पनि हुन्छ। कम्यूनिष्टहरुले धर्म मान्दैनन, त्यसैले कम्यूनिष्टहरुको बिश्व भरिको इतिहास हेर्दा सबैजसो कम्यूनिष्टहरुले मान्छे मारेका छन्। बिश्व युद्धले भन्दा धेरै मान्छे कम्यूनिष्टहरुको कारण मारिएका र मरेका छन्।
थप अध्ययनबाट पाइएको कुराले अझै प्रष्ट पर्छ, धर्मको कुनै रुप या स्वाद हुँदैन। यो हरेक कालखण्डमा उस्तै रहन्छ, यसमा परिवर्तन आउँदैन। केवल धर्म गर्ने व्यक्ति र ठाउँ अनि बिषय फरक हुन्छन। त्यसैले होला पूर्वीय धर्म दर्शनले अग्नि, जल, बायु, आकास र धर्तिलाइ धर्म मानेको। अग्नि, जल, बायु, आकास र धर्तिका गुण, काम, अवस्थामा आफैं परिवर्तन आउँदैन।
अर्को अर्थमा धर्म सत्य पनि हो। अग्नि, जल, बायु, आकास र धर्ति, यिनीहरु सृष्टि देखि ऐले सम्म पनि उस्तै छन्। आगो दाउरा, हिटर, बिजुली, टुकी या जे जे मा बाले पनि यसको गुण र दिने कुरा ताप नै हो। हरेको बस्तुले दिने तापको क्षमता र प्रकृति फरक हुन्छ तर दिने कुरा चाहिं ताप नै हो। यसर्थ धर्मले दिने कुरा पुण्य हो, लोकसेवा हो र सतगुण हो।
धर्म भन्ने बितिक्कै हामी हिन्दू, मुश्लिम, ख्रीष्टियन आदि बुझ्ने गर्दछौ। तर धर्मको अर्थ यो होइन। त्यो त पछि धर्मको बिकास हुँदा धर्मीहरुको समुदाय बन्दै जाँदा बिकास भएका सम्प्रदाय हुन्। यिनीहरुलाई धर्म होइन धार्मिक सम्प्रदाय भनिन्छ। तर आज देखिने सबै धर्मका सम्प्रदाय भन्दा हिन्दू सम्प्रदाय पुरानो हो। हरेक धर्मको श्रोत र तत्व खोज्दै जाँदा हिन्दू धर्मको आधारशीलामा पुगेर टुंगिन्छ।
NRNA:पहिलो बैठक सम्पन्न, १९ वटा एजेन्डामा छलफल, श्रमिक कल्याणकारी कोषममा १ करोड ६ लाख संकलन
नेपाली श्रमिकका लागि स्थापित श्रामक कल्याणकारी कोषका लागि रु १ करोड ६ लाख रुपैयाँ राहत रकम दिने निर्णय गरेको छ
NRNA:नयाँ नेतृत्वको पहिलो बैठक, सल्लाहाकार र संरक्षकहरुको मनोनयन
धान भित्र्याउने बेलामा ‘फौजी किरा’को प्रकोप
खानेपानी मन्त्री बिना मगरद्वारा गुहेश्वरीस्थित पानी प्रशोधन केन्द्रको निरीक्षण
प्रहरी चौकीका इञ्चार्च नै महिला यौन दुर्व्यवहारमा
राति १० बजेपछि देउसीभैलो खेल्न नपाईने
अल्टिमेट आकाशको नेपाल संस्करण लोकार्पण
NRNA नवौँ गैरआवासीय नेपाली विश्व सम्मेलन काठमाडौँ घोषणा पत्र–२०१९
दाङ देउखुरी डान्स आइडल सुरु हुने
NRNA:गैरआवासीय नेपाली संघको निर्वाचन सम्पन्न, कुमार पन्त अध्यक्षमा निर्वाचित
NRNA:अमेकाज क्षेत्रका त्रिपाठी, पोख्रेल, कार्की र सापकोटा बिजयी
NRNA:एनआरएनहरुको निर्वाचनमा २३४० मत खस्यो, १४०० को हाराहारीमा कुमार पन्त जित्ने अनुमान
NRNA:एनआरएनहरुको मतदानमा २३४४ मत खस्यो, नतिजा आउन केहि घण्टा लाग्ने
दाउराको चिर्पट प्रहार गरी ससुरा हत्या गर्ने बुहारी पक्राउ
मुस्ताङको छुसाङमा मोटरेवल पुल निर्माण : उपल्लो मुस्ताङ सिधा यातायात सञ्जालमा जोडीयो
NRNA:सिष्टमले सपोर्ट नगरेपछि एनआरएनएको निर्वाचन आज हुँदै
लघुकथा आदर्श नेता
मृगौला झिकेर किनबेच तथा प्रत्यारोपण गरेको आरोपमा पाँच जना पक्राउ
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी म्यान्मार प्रस्थान:राष्ट्रपतिको कार्यभार उपराष्ट्रपतिलाई
NRNA:अधिकाँस काँग्रस नेता कुमार पन्ततिर, कुल आचार्यको नाममा नेपाली काँग्रेस हार्दै
NRNA:चुनाव अघिनै कूल आचार्यमा सन्नाटा, केही नलागेपछि कुमार पन्तको बदनाम प्रयास
मेलामा यूवामाथि खुकुरी प्रहार गर्ने पाँच पक्राउ
बुद्ध एयरको काउन्टर तोडफोड गर्ने प्रतिनिधिसभा सांसद प्रमोद साह पक्राउ
NRNA:एनआरएनहरुको महाधिवेशन र चुनावी माहोल, कसको पल्लाभारी ?
मन्त्रिमण्डल हेरफेर गर्ने तयारी
क्षमताभन्दा तेब्बर कैदीबन्दी :क्षमता २५ जना भएको गुल्मी कारागारमा ८३ जना कैदी
नवौँ गैरआवासीय नेपाली विश्व सम्मेलन तथा अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशन असोज २८–३० गतेसम्म (१५–१७ अक्टोबर २०१९)
NRNA:महाँवाणिज्य दुत एसी शेर्पा निर्वाचन उम्मेद्वार नहुने
NRNA:बिनोद प्रसाद भट्टराई मध्येपूर्व क्षेत्रको उपसंयोजकका उम्मेदवार
NRNA:आइसीसी सदस्य राजन त्रिपाठी अमेरिकाज क्षेत्रको संयोजकका उम्मेदवार
उप प्रमुख उमा मगर सातौं एशिया प्रशान्त अर्वन फोरममा भाग लिन मलेसिया प्रस्थान
दरबारमार्गस्थित क्लब भिक्ट्रीमा आगलागी
नेपाल र चीनबीच १८ समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भयो
कांग्रेसका सांसद आलम पक्राउ परे
नेपाली कांग्रेसले आज देशभर चियापान कार्यक्रम गर्दै
तनहुँमा बस र बलेरो ठोक्किंदा बलेरो चालकको मृत्यु
आज कोजाग्रत पूर्णिमा,कार्तिक स्नान शुरु
NRNA:पूर्व आरसी सोनाम लामाद्वारा उपाध्यक्षमा उम्मेद्वारी घोषणा
‘भूपरिवेस्टित मुलुक’बाट‘भूजडित’ मुलुक बन्ने सपना साकार तुल्याउन चीनले सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता
सी जिनपिङको सुरक्षामा नेपाली सेनाको रातभर हवाई गस्ती
NRNA:एनआरएनमा काँग्रेसको उम्मेद्वार हुँदैनन, आपसमा मिलेर जानुहोस-नेकाँ नेता खड्का
नेपालको विकासमा सहयोग गर्ने राष्ट्रपति सीको घोषणा
चिनियाँ राष्ट्रपति सी काठमाण्डौंमा:सीको नेपाल भ्रमण करिब २० घन्टाको हुने
युक्रा अमेरिकाद्धारा स्वर्गीय सन्त बहादुरप्रति श्रद्धान्जलि